अपजसको भारी बोक्नुपर्छ भने अनुशासनको पद्धति बसाउनुस् सभापतिज्यू ! - New York Samachar
वास्तवमा मुलुकमा जहिले जहिले एमाले प्रतिपक्षीमा रहन्छ, तहिले तहिले सत्तारुढ परिवेशलाई उसले ‘हायलकायल’ बनाइरहेको देखिन्छ । रचनात्मक प्रतिपक्षीको नाममा विगतदेखि आजसम्म एमालेले जे–जस्ता ‘ताण्डव’ देखाइरहेको छ, त्यसलाई संगठित रुपमा उठाएनन् सत्तारुढ संरचनाले ।
आईजीपी फेरवदलदेखि अदालती सम्मान विरुद्ध ‘विषबमन–संस्कृति’को सुरुवात कसले गरेको हो ? कहीँ प्रश्न उठाइएन । बहुमतको सरकारलाई सडकमार्फत ढाल्ने ‘शंखघोष’सँगै आलोचनात्मक–समर्थनको द्विविधा–मान्यता पाल्ने पार्टीले हिजै मात्र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपाउने प्रवृत्ति उठान गरिसकेको छ । संसदीय राजनीतिभित्र सत्तारुढहरुले ‘सरकार’ छोड्न लाग्दा सत्ता छाड्न नहुने तर्क र पुष्ट्याइँ प्रतिपक्षीले जे र जसरी अघि सारेको छ, यो विश्वमै विरलै देखिएला ।